“Booska 5-aad ayuu kaga jiraa Messi weeraryahannadii ugu fiicnaa ee aan ka hor imid.”. - Gool FM	twitter
“Booska 5-aad ayuu kaga jiraa Messi weeraryahannadii ugu fiicnaa ee aan ka hor imid.”.
(Roma) 10 Okt 2016. Daafaca dhexe ee Roma Kostas Manolas ayaa Lionel Messi ku daray shanta weeraryahan ee ugu fiicnaa ee uu ka hor yimi waayihiisa xirfadeed oo dhan.
Mar la weydiiyey in uu liis ka sameeyo shanta ciyaaryahan ee ugu sarreeya ee uu wajahay, Manolas waxa uu magacaabay Zlatan Ibrahimovic, Luis Suarez, Karim Benzema iyo Cristiano Ronaldo oo dhamaantood ka horreeya Lionel Messi.
“Ma aha weeraryahan ku kooban duullaanka, markaa, uma xiran si toos ah waana kaliya midaas sababta aan u galiyey booska shanaad ee liiska,” ayuu Manolas ku sharraxay wareeysigii uu la yeeshay Website-ka rasmiga ah ee Roma.
“Laakiin aad ayuu ugu xawaareeyaa marka laga hor yimaado halka uu wajiga goolka marka uu yimaado garanayo waxa sax ah ee laga sameeyo, hadii ay ahaan lahayd darbeyn ama u dhiibad saaxiib aan la xirin. Mar waliba waxa uu sameeya qaabka ugu wanaagsan.”
Manolas waxa uu qoddobo ka qod qoday weeraryahanada kale ee uu caqabadda kala kulmay markii uu wajahayey isaga oo hooska ka xariiqay waxyaabaha lagu garto ee dadka ka soo dhex saaray kana dhigay mushaakil in lala tacaalo.
“Ibra waa quwad dabiici ah, lama loolami kartid inta lagu guda jiro kulanka maxaa yeelay awood jireed la yaab leg ayuu leeyahay,” sidaas waxaa yiri 25 jirka.
“Waxaan ka hor imid Suarez sanadkan (2015-16 Champions League) kulankii aan la dheelnay Barcelona. Waa qof doonaya in uu dhaliyo arkana goolka. Waa mid halis ah, adag tahay in aad joojiso oo ku dhammeeystiran wajiga goolka.
“Benzema sidoo kale waa mid adag. Wuu dhammeeystiran yahay, maxaa yeelay jir ahaan wuu xoog badan yahay aad ayuuna farsamo u leeyahay. Marka ay jir quwadeedka iyo farsamada isku yimaadaan nooma fududa in aan jawaab u helo ka daafacyo ahaan.
“Cristiano Ronaldon waa cajiib. Wax walba wuu leeyahay – gambiska, wuu yaqaan halka goolku jiro, jir ahaana wuu xoogan yahay.
“Markii lagu guda jiray is aragii Real Madrid ee sanadkii tagay, waxa uu helay laba fursadood labadii kulan ee guriga iyo dibadda wuuna dhaliyey. Dilaa.